Home Wararka Dibada Jig-jiga soo gaadhay 100 cagafyo
Waxaa magaalada Jig-jiga soo gaadhay 100 cagafyo oo ah wajigii koowaad ee 162 cagaf oo ay xukuumaddu soo iibisay.
Cagafyadan oo loogu talo’galay barnaamijka wax-soo-saarka beeraha (Dalag iyo Daryeel) ayay xukuumaddu dalabtay muddo kahor sida qorshuhu ahaana wakhtigoodii ayay soo gaadheen Deegaanka, waxaana si wada jir ah u daah-furay Madaxweynaha DDS, mudane Mustafe Muxummed Cumar iyo Wasiirka Beeraha DDS, Dr. C/qaadir Iimaan.
Madaxweyne Mustafe Muxummed Cumar ayaa waxa uu sheegay in baahida aynnu kaga bixi karno dhulkeenna oo aynnu beerano. Cagafyani iyo kuwa kale ee soo socdaba waxa ay keeni doonaan in qaab casri ah ay bulshadeennu u fashaan beeraha lagana guuro qaabkii hore ee dhaqamiga ahaa; haddii laga guuro qaabkaasina waxaa kor-u-kici doona wax-soo-saarkeenna ayuu yidhi madaxweynuhu.
Madaxweynuhu waxa uu kula dardaarmay bulshada Deegaanka in ay ka faa’iidaystaan khayraadka dhulkooda gaar ahaan wax-soo-saarka dalagga beeraha oo ay ahmiyad ballaadhan siisay xukuumadda Deegaanku.
Dr. C/qaadir Iimmaan ayaa waxa uu yidhi Cagafyadani isbaddal ballaadhan oo dhinaca wax-soo-saarka beeraha ah ayay u keeni doonaan Deegaanka, waana fursad dahabi ah oo u soo korodhay shacabkeenna.
Cagafyadan ayaa qaab dayn ahaan ah loo siin doonaa beeralayda Deegaanka ee ku fooggan khayraadka dhulkooda iyada oo lagu xidhayo shuruudo uu soo diyaariyay Xafiiska Beeruhu sifo loo xoojiyo wax-soo-saarka.
Next articleMidawga Shirkadaha Isgaarsiinta ee Caalamka ayaa warbixi ay soosaartay